မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝမ်းလုံးရှိ ကျောင်းသားထုတစ်ရပ်လုံး၏ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးနှင့် လူမှုဘဝ ကျန်းမာ ရေးကို မြှင့်တင်နိုင်ရန်။
ကျောင်းသားလူငယ်များ၏ ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းကို မြှင့်တင်နိုင်ရန်
ကျောင်းသားလူငယ်များ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သည့် လူနေမှုဘဝပုံစံများသိရှိ ကျင့်သုံးစွဲမြဲ စေရန်
ကျောင်းသားလူငယ်များ၊ ပညာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် ကျောင်းရှိလူအားလုံးအား ကျန်းမာရေး အဆင့်မြှင့်ကျောင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ (Health Promoting School Approach) ဖြင့် ကျောင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးရန်
ကျောင်းကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းမှတဆင့် တစ်မျိုးသားလုံးကျန်းမာရေး အဆင့်မြင့်မားတိုးတက်လာ စေရန်
၁။ မူဝါဒနှင့် လမ်းညွှန်စာအုပ်များ ရေးဆွဲပြုစုခြင်း
နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးမှ (၂၀၁၈)ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ(၈)ရက် ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ်၊ ၂၁/၂၀၁၈ ကို ထုတ်ပြန်၍ ဗဟိုအဆင့်ကျောင်းကျန်းမာရေး ကော်မတီနှင့် ကော်မတီ အဆင့်ဆင့်ကို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
အမျိုးသားအဆင့် ကျောင်းကျန်းမာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၇-၂၀၂၁) ကို (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ပညာသင်နှစ်တွင် အခြေခံပညာဦးစီးဌာနနှင့်ပူးပေါင်း၍ ရေးဆွဲပြီး လုပ်ငန်းများ ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
(၂၀၁၇-၂၀၁၈) ပညာသင်နှစ်တွင် ကျောင်းကျန်းမာရေးလက်စွဲစာအုပ်ကို အပြီးသတ် ပြင်ဆင်ရေးသားပြီး (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ပညာသင်နှစ်တွင် ကျောင်းကျန်းမာရေးလက်စွဲ စာအုပ် နှင့် သင်တန်းဆရာလက်စွဲ စာအုပ်အား ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် မြို့နယ်များရှိ ကျောင်း ကျန်းမာရေးဌာနခွဲများသို့ ဖြန့်ဝေခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်းတွင် ကျောင်းကျန်းမာရေးလက်စွဲစာအုပ်နှင့် ဆယ်ကျော်သက်လူငယ် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပေးသူလက်စွဲစာအုပ်စာအုပ်များအား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်၊ မြို့နယ်များရှိ ကျောင်းကျန်းမာ ရေးအဖွဲ့များသို့ ဖြန့်ဝေနိုင်ခဲ့ပါသည်။
National Strategic Plan for Young People Health (2016-2020) ရေးဆွဲ အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ပြီး (၂၀၁၈) ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် Midterm review ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
(၁၂/၁၃-၆-၂၀၁၉) တွင် ကျန်းမာရေးအဆင့်မြှင့်ကျောင်း အရှိန်ဟုန်မြှင့်တင်ရေး အမျိူးသားအဆင့် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲအား နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်း၍ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
(က) ကျန်းမာရေးအဆင့်မြှင့်ကျောင်း လုပ်ငန်းစဉ် (၉) ရပ်
ကျောင်းကျန်းမာရေးပညာပေးလုပ်ငန်း(ကျောင်းကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရာတွင် ကျန်းမာရေးပညာ ပေးခြင်း၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ "ဘဝတွက်တာ ကျွမ်းကျင်စရာ" သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို သင်ကြား ခြင်း (၂) ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်း (ခြင်ကျားကင်းစင်၊ အမှိုက်ကင်းစင်ကျောင်းနှင့် ယင်လုံအိမ်သာသုံးစွဲရေး၊ ကျောင်းအခြေပြု သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါကာကွယ်ရေး) (၃) ကျောင်း ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း (အခြေခံကျန်းမာရေး စစ်ဆေးကုသခြင်း၊ အခြေခံသွားနှင့် ခံတွင်းကျန်းမာရေး စစ်ဆေးကုသခြင်း၊ အရပ်နှင့် ကိုယ်အလေးချိန် တိုင်းတာခြင်း) (၄) ရောဂါကာ ကွယ်ရေးလုပ်ငန်း (သန်ကောင်ရောဂါကာကွယ်ရေး၊ ဆေးလိပ်ကင်းစင်၊ ပိုး‌လောက် လန်းကင်းစင်၊ မူးယစ်ဆေးကင်းစင်နှင့် အရက်သေစာ ကင်းစင်သော ကျောင်းများထူထောင်ရေး) (၅) ကျောင်းတွင်း အာဟာရဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အစားအစာများ အန္တရာယ်ကင်းဝေးရေးလုပ်ငန်း (၆) ပြည်သူလူထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် ကျောင်းမှ ပြည်သူတွင်းသို့ မူမှန်လူနေမှု ဘဝဟန်များ ရောက်ရှိရေးလုပ်ငန်း၊ (၇) နှစ်သိမ့်ပညာပေးဆွေးနွေးခြင်းနှင့် လူမှုရေးပံ့ပိုးမှုလုပ်ငန်း၊ (၈) သင်တန်းနှင့်သုတေသနလုပ်ငန်း၊ (၉) ကာယနှင့်အားကစားလုပ်ငန်း
(ခ) ကျောင်းကျန်းမာရေးသီတင်းပတ်လှုပ်ရှားမှုများဆောင်ရွက်ခြင်းအား နှစ်စဉ် ဩဂုတ်လ ဒုတိယ အပတ်တွင် ဆောင်ရွက်ခြင်း
(ဂ) ကျောင်းအခြေပြု သန်ချဆေးတိုက်ကျွေးခြင်း(Albendazole 400mg ) ကို မူလတန်းမှ အထက် တန်းအထိ တစ်နှစ်လျှင် နှစ်ကြိမ် တိုက်ကျွေးခြင်း
(ဃ) ကျန်းမာရေးအဆင့်မြှင့်ကျောင်း နှင့် ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ဆရာ ဖြစ်သင်တန်းအား ဗဟို၊ တိုင်းနှင့် မြို့နယ်များတွင် ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဌာနမှ တာဝန်ခံများ အား အဆင့်ဆင့် သင်တန်းပေး ဆောင်ရွက်ခြင်း
School Health Activities
To promote physical, mental and social health of entire students
To promote health status of students
To adopt Healthy Life style among students
To give health services as Health Promoting School Approach to all students, teachers and education staffs
To promote the health status of all citizens through health promoting school
Governance / Guidelines / Strategic plan/ SOP
Reformed School health Committee at different level ( Central/ State-Regions/ District/ Township/ School level) ordered by President office in 2018 February 8
Myanmar National Comprehensive School Health Strategic Plan (2007-2022) was made in (2016-2017) academic school year in collaboration with Ministry of Education and continuing impelmentation
Reviewed and Revised School Health Manual in (2017-18) Academic school year .
Printing and Distribution of (1) Edited School Health Manual (2) Manual for Multiplier training for school health and adolescents at township level and (3) Adolescent and Youth Health Friendly Health Services Manual to states and regions school health teams
National Strategic Plan for Young People Health (2016-2020) was made and mid-term reviewed in 2018 March.
National Seminar on strengthening Health Promoting School instructed by State Counsellor was held during 12th – 13th June, 2019.
(i) Nine Components of Health Promoting School
School Based Health literacy promotion
Prevention and control of both communicable and non-communicable diseases
Nutrition promotion and Food Safety
Physical Education, Fitness and Sports
(ii) Holding School Health week events during the second week of August Annually at different level
(iii) Deworming with Albendazole 400mg six monthly to all primary, middle and high school students
(iv) TOT on Health promoting school and Adolescent and youth health friendly health services at different levels